Ike duel na Euro - comparatif-audio.net
Ike duel na Euro
Euro 2020 amalitelarị, anyị nwere nnukwu mmetụta na enweghị obi abụọ duels na egwuregwu dị egwu; mana nke kacha mma ka na-efu na nke ahụ bụ na otu abụọ kachasị amasị na egwuregwu ahụ ga-eche ibe ha ihu na Tuesday a, June 15: France na Germany.
Mgbe mmeri ndị World Cup na Russia, otu ndị France ghọrọ otu ga-eti, ha nwere nwata egwuregwu bọọlụ nwere agwa dị mma. N’echiche a, Kylian Mbappé, PSG na-agan’ihu, na-adị ka oge ọ bụla dịka onye ọkpụkpọ tozuru etozu ma soro un dị ka onye isi ndị agha ga-anwa iti ndị Germany ọzọ.
France na-abịa egwuregwu asaa nke egwuregwu na-enweghị mmeri, akara ha na-ele anya nke ọma ma Didier Deschamps na-eduzi ha nke ọma,n’ihi ya, ha na-apụta dị ka ọkacha mmasị ọkụ na nsogbu nke + 170 * na Akwụkwọ akụkọ anyị,n’agbanyeghị eziokwu na egwuregwu a Ọ ga-egwu na Allianz Arena na Munich.
Na-ebi ndụ agụụ mmekọahụ nke European soccer na akwụkwọ egwuregwu anyị
Ọnọdụ pụrụ iche maka ndị Teutons
Ndị German Dont Joachim Low na-ejedebe usoro ihe ịga nke ọma na njikwa, agbanyeghị, ha efunahụghị mkpa na mpaghara ahụ: ha tufuru na njikọ Europe na North Macedonia na duel akụkọ ihe only eme ma na-anwa ibili na ntorobịa. .
Anyị maara banyere ike akụkọ ihe only eme nke Teutons, mana ha atawo ahụhụ na-egbu mgbu d e ọnwa ndị na-adịbeghị anya, gụnyere mmeri 6-0 megide Spain,n’agbanyeghị na ha nwere akara nke + 182 * iji malite ọrụ ha na mmeri.
Bie ndụ obi ụtọ niile nke asọmpi a pụrụ iche, wulite amasị gị d e egwuregwu egwuregwu gị d e ndị otu ị kachasị amasị gị ma bụrụ akụkụ nke Strendus Universe.